China L-Threonine CAS 72-19-5 ho an'ny mpamokatra sy mpamatsy ny Grade Parma (USP) | Honray
Anaran'ny vokatra ：: L-Threonine
Amin'ny maha famenon-tsakafo famahanana azy dia matetika ampidirina ao anaty vilona ho an'ny zana-kisoa sy akoho amam-borona ny L-threonine (Ab Shortated Thr). Io no asidra amine faharoa mametra amin'ny famahanan-kisoa ary ny asidra amine fahatelo mametra amin'ny sakafom-borona.
1. Ampiasaina indrindra ho famenon-tsakafo.
2. Ampiasaina ho famenon-tsakafo famahanana. Matetika izy io dia ampiana ao amin'ny vilona ho an'ny zana-kisoa sy akoho amam-borona. Io no asidra amine faharoa mametra amin'ny famahanan-kisoa ary ny asidra amine fahatelo mametra amin'ny sakafom-borona.
3. Ampiasaina ho famenon-tsakafo ary ampiasaina amin'ny fanomanana fampidiran-dra asidra amine.
4. Ampiasaina amin'ny fitsaboana adjuvant ny valanaretina pozika ary koa ampiasaina amin'ny fanasitranana ny anemia, angina, aortitis, tsy fahampiana aretim-po ary aretina hafa amin'ny rafi-pitatitra fo.
Ny L-Threonine dia vita amin'ny fermentation mikraoba miaraka amin'ny glucose toy ny akora, ary avy eo voadio aorian'ny filtran'ny membrane, ny fifantohana, ny kristaly, ny fanamainana ary ny dingana hafa. Miorina amin'ny fermentation microbial, L-threonine dia azo antoka ary azo antoka raha tsy misy residu misy poizina ary misy amin'ny karazan-tsakafo (ao anatin'izany ny sakafon'ny orinasa mpiorina any ivelany) azo ampiasaina. Amin'ny maha asidra amine tena ilaina azy, ny L-Threonine dia ampiharina betsaka amin'ny fametahana sakafo, famenon-tsakafo ary fanafody sns.
Amin'ny maha-additive feed azy, L-threonine dia fitaovana matanjaka manampy amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny sakafo ary mampihena ny vidin'ny sakafo ho an'ny mpamokatra fahana. Ny L-Threonine dia ampiana betsaka amin'ny sakafon-kisoa, sakafon-kisoa, sakafon'ny akoho, sakafom-boaloboka ary sakafon-tsolika miaraka amina lysine amin'ny ankapobeny. Ny L-Threonine dia mitana ny andraikiny amin'ny lafiny maro toy ny fanampiana ny fifandanjana amin'ny fananganana asidra amine hanafaingana ny fitomboana, ny fanatsarana ny kalitaon'ny hena, ny fahazoana lanja ary ny isan'ny isan-jaton'ny hena, ny fihenan'ny tahan'ny fiovan'ny sakafo, ny fihenan-danja ny lanja mahavelona misy ny sakafo matsiro, manampy ny mitahiry ny loharanon-karena proteinina ary mampihena ny vidin'ny fividianana sakafo amin'ny alàlan'ny fanapahana ireo proteinina hampiana ao anaty sakafo, mampihena ny azota voaroaka ao amin'ny zezika, ny fika sy ny amoniônia ary koa ny taham-pahafahana any amin'ny henan'omby sy ny akoho amam-borona ary manampy amin'ny fanamafisana ny biby tanora ' hery fiarovana hanohitra aretina.
sahy miteny 98,5% ~ 101.5%
Sarobidy PH 5.0 ~ 6.5
Fahaverezan'ny maina ≤0.2%
Ajanona amin'ny fandrehitra ≤0.4%
Metaly mavesatra (toy ny Pb) ≤0.0015%
Solifata (toy ny SO4) ≤0.03%
Asidra amine hafa mifanaraka
Fihodinana manokana -26.7 ° ~ -29.1 °
Previous: L-Methionine CAS 63-68-3 ho an'ny sokajy Pharma (USP)
Manaraka: L-Isoleucine CAS 73-32-5 ho an'ny sokajy Pharma (USP / EP)
Kilasy Sakafo L-Threonine, Farm kilasy L-Leucine, 73-32-5 L-Isoleucine, L-Valine 72-18-4, L-Threonine Pharm, Sakafo biby,